China Tattoo Adjustable Height အနက်ရောင်လက်မောင်းနားကြပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ။ | မော်လမြိုင်
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည် - အိတ်ဆောင်
တစ် ဦး ဝတ်စုံကိုအမှု၌ကိုက်ညီ!
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်း - ယှဉ်ပြိုင်မှု
တာရှည်ခံ & အမြဲတမ်း & တည်ငြိမ်သော
ထိုင်ခုံ၊ လက်မောင်း၊ ရင်ဘတ်နှင့်ခေါင်းခေါင်းတို့ကိုအပြည့်အ ၀ ချိန်ညှိနိုင်သည်။
အမျိုးအစားအမျိုးအစား: Tattoo လက်မောင်း
ပစ္စည်း: သတ္တု + Faux သားရေ
အနက်ရောင် Pad အရွယ်အစား: ခန့်မှန်းခြေ။ 22 x 17 စင်တီမီတာ / 8.7 x ကို 6.7 လက်မ
ချိန်ညှိအမြင့်: approx ။ 83-136 စင်တီမီတာ / 31.5-52.8 လက်မ
Professional ကတက်တူးထိုးဆက်စပ်ပစ္စည်း armrest
အမျိုးမျိုးသောရာထူးများတွင်အမြင့်နှင့် armrest ကိုညှိနိုင်သည်။
ခလုတ်ကို နှိပ်၍ သင်လိုချင်သောထောင့်သို့နောက်သို့လှည့်ပါ။ မပါလျှင်မဏ္ivိုင်သို့မဟုတ်ထောင့်သာရှေ့သို့သို့မဟုတ်နောက်ကျော tilts
အပိုင်းသုံးပိုင်း ခွဲ၍ အမှန်တကယ်ပေါ့ပါးပြီးသေးငယ်သောပမာဏဖြစ်သည်
- လက်မောင်း၊ ခြေထောက်များသို့မဟုတ်ခြေထောက်များအနားယူရန်အတွက်ပျော့ပျောင်း။ သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်နေရာ။
- Ergonomics ဒီဇိုင်းသည်သင့်အားမည်သည့်ထောင့် (၁၈၀ ဒီဂရီကျော်) မှတက်တူးထိုးခြင်းနှင့်ကိုက်ညီရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။
- လက်မောင်း၊ ခြေထောက်များခြေထောက်များအနားယူရန်ပျော့ပျောင်းသောသက်တောင့်သက်သာရှိစေခြင်းဖြင့်သုံးစွဲသူ၏သက်တောင့်သက်သာရှိစေသည်။
- Tripod ၏ရပ်တည်ချက်သည်ပိုမိုတည်ငြိမ်။ ချောမွေ့မှုရှိသည်။
- အိတ်ဆောင်နှင့်ခေါက်နိုင်သော၊ သိုလှောင်ရန်သို့မဟုတ်သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။
【 Professional 】 Professional တက်တူးထိုးလက်မောင်းအနားယူခြင်းနှင့်ခြေထောက်နားကပ်ခြင်း၊ ပျော့ပျောင်းသောအထူသည် pad၊ ခြေထောက်များနှင့်ခြေထောက်များအနားယူခြင်းကိုသက်သာစေသည်။
Ad အမြင့်ချိန်ညှိ】 your သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ 65cm မှ 125cm မှအမြင့်ကိုချိန်ညှိနိုင်ပြီးသင်နှင့်သင့်ဖောက်သည်များအားအတွေ့အကြုံများစွာပေးသည်။ ခိုင်ခံ့သောသယ်ဆောင်နိုင်စွမ်း, armrest ရပ်တည်ချက်ကွဲပြားခြားနားသောအလေးမလူများအတွက်လုံလောက်သောထောက်ခံမှုပေးနိုင်ပါသည်
【ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့】ဒီတက်တူးထိုးလက်ကအနားယူခြင်းဟာဖြုတ်တပ်လို့ရပြီးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းရလွယ်ကူတယ်။ တက်တူးသည်မည်သည့်တက်တူးအလုပ်အတွက်မဆို ၁၈၀ ဒီဂရီထောင့်ကိုထိန်းညှိပေးသည်။
Sk မတော်တဆဖြစ်မှုကိုတားဆီးခြင်း rubber ရော်ဘာအစောင်းများပါ ၀ င်သောခြေထောက်များပါသောခြေထောက်များသည်တက်တူးထိုးခြင်းအတွက်တည်ငြိမ်စေသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တက်တူးထိုးအလှပြင်ဆိုင်သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်တက်တူးထိုးအနုပညာရှင်အတွက်အကောင်းဆုံးသောထုတ်ကုန်။
【 One-On-One ၀ န်ဆောင်မှု】 အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းလိုပါကအီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ပြyouနာကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါသည်။ ခြွင်းချက်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့လုပ်ပေးရုံပါပဲ!
ရှေ့သို့ KingKong3Tattoo ကျည်တောင့်စက်
နောက်တစ်ခု: တစ်ခါသုံးဆီလီကွန်ချိန်ညှိနိုင်သောတက်တူးထိုးသည့်အရာတစ်ခု (25pcs / box)
ချိန်ညှိနိုင်သောအမြင့်သံမဏိ Tattoo Arm Re ...